Mayelana Nathi - Sinomeasure
I-Sinomeasure izinikele kuzinzwa ezishintshayo zenqubo yezimboni kanye nethuluzi kusukela yasungulwa amashumi eminyaka.Imikhiqizo eyinhloko ithuluzi lokuhlaziya amanzi, irekhoda, i-pressure transmitter, i-flowmeter nezinye izinsimbi zasensimini.
Ngokuhlinzeka ngemikhiqizo eqeqesheke kakhulu kanye nensizakalo yokuma okukodwa, iSinomeasure ibisebenza ezimbonini ezisabalele njengowoyela negesi, amanzi namanzi angcolile, amakhemikhali kanye ne-petrochemical emazweni angaphezu kwe-100, futhi izothatha eminye imizamo yokuhlinzeka ngenkonzo ephakeme kakhulu futhi ukuhlangabezana nokwaneliseka kwamakhasimende.
Ngo-2021, iSinomeasure inenani elikhulu labacwaningi nonjiniyela be-R&D, kanye nabasebenzi abangaphezu kuka-250 eqenjini.Ngezidingo ezihlukene zezimakethe namakhasimende omhlaba, iSinomeasure isisungule futhi isungula amahhovisi ayo eSingapore, Malaysia, India, njll.
I-Sinomeasure yenza imizamo engaguquki yokusungula ubudlelwano obuqinile nabasabalalisi emhlabeni wonke, izihlanganise nohlelo lwasekhaya lokuqamba izinto ezintsha futhi ngesikhathi esifanayo inikela ezenzweni ezintsha zobuchwepheshe zomhlaba wonke.
"I-Customer centric": I-Sinomeasure izoqhubeka izinikele ekucubunguleni izinzwa ezizenzakalelayo namathuluzi, futhi idlale indima ebalulekile ezimbonini zamathuluzi zomhlaba.
I-Supmea VR / 360° Factory Tour
Uzibophezele ukucubungula izixazululo ezizenzakalelayo
I-Sinomeasure Science and Technology Park
I-Sinomeasure R&D kanye nesikhungo sokukhiqiza, esinomshini wokukhiqiza okuzenzakalelayo othuthuke kakhulu kanye nemishini yokulinganisa e-China, sizibophezele ekuhlinzekeni amakhasimende ngemikhiqizo ezenzakalelayo ephezulu kakhulu.
I-Global Marketing Center
I-Sinomeasure izibophezele ekuhlangabezaneni nezidingo zamakhasimende ngokuhlinzeka ngemikhiqizo namasevisi afanelekayo.Ukuze kuqiniswe ubudlelwano namakhasimende, iSinomeasure imise izikhungo zamakhasimende ezingaphezu kuka-30 ngenhloso yokuhlangana namakhasimende emhlabeni jikelele.
Isikhungo se-R&D saseZhejiang University
Isikhungo se-Sinomeasure 1st R&D siseSayensi Park yaseZhejiang University.I-Sinomeasure igxile ekuxazululeni izixazululo ze-automation.Isikhungo se-R&D siqinisekisa ukuthi sisendaweni ehamba phambili ezinzwa nobuchwepheshe bokulinganisa, futhi sihlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esebenzayo nesebenzayo.
I-Sinomeasure ivela embonini ezenzakalelayo, imibukiso yokwelashwa kwamandla namanzi kanye nama-showrooms emhlabeni wonke.Sisekela imisebenzi yezokuxhumana yenkampani ngokwenza imibukiso ngokusuka kwethu noma ngokubambisana nabanye ekucabangeni nasekukhiqizeni amaphrojekthi afanayo.
I-Hannover Messe ingomunye wemibukiso emikhulu yokuhweba lapho imibukiso eminingana ehlobene nobuchwepheshe bezimboni yenziwa ngesikhathi esisodwa.Iphinde ibe umbukiso wezimboni omkhulu kunayo yonke emhlabeni, ekhombisa inhlobonhlobo yobuchwepheshe bezimboni kusukela emishinini yezimboni, isoftware, amarobhothi kanye ne-automation.
I-Miconex iyisilawuli sokulinganisa esikhulu kunazo zonke, i-instrumentation kanye nombukiso wokuzenzakalelayo e-Asia.Izinkampani ezingaphezu kuka-500 ezivela emazweni angaphezu kuka-20 nasezifundeni emhlabeni jikelele zibambe iqhaza embukisweni kanye nezivakashi ezingaphezu kuka-30,000 zezimboni zezimboni ezivakashelwe.